1920s Vibe Lower Flat. Umlambo iRouge/Detroit
Le flat ithambileyo isezantsi ibekwe ngaphandle nje kweDetroit! Kuphela i-15 min ukuya eDowntown; I-10 min ukuya kwi-I-75 okanye i-I-94. Uya kuba nayo yonke iflethi esezantsi kuwe (iflethi ephezulu inomqeshi osisigxina). Iwasha kunye nesomisi kwindawo! Indlu yakhiwa ngo-1920, ngoko ke sigqibe kwelokuba siyibhiyozele ikhulu leminyaka ngokuyihombisa ngendlela ekhumbuza ngeminyaka yoo-1920s.
Sicinga ukuba ungakuthanda ukuhlala kwikhaya lethu elipholileyo lika-1920s -- indawo yiflethi esezantsi ehonjiswe ngempahla yakudala kunye nezixhobo! Kukho umqeshi ohlala kwiflethi ephezulu, ngoko ke ngokungathandabuzekiyo uya kuva izandi zabo behamba-hamba okanye bebukele iTV-basebenza kakhulu, ngoko bahlala bezolile kakhulu. Iindwendwe kuya kufuneka zihloniphe ummelwane kwaye zilandele imithetho yendlu yeeHore eziThulileyo (emva kwentsimbi ye-10pm). Ngeflethi esezantsi uwedwa, uya kuba namagumbi amabini okulala kunye nekhitshi eligcweleyo--indawo egqibeleleyo yabantu abahamba ukuya eDetroit emsebenzini, okanye usapho oluncinci olundwendwela ngaphandle kwedolophu. Kuya kufuneka ukhwele izinyuko ezintlanu ukuya kwiveranda yethu enkulu engaphambili, kodwa emva koko yonke into ikwinqanaba elinye. Igumbi lokuhlala linendawo yokuhlala eninzi yokuphumla okanye ukubukela iTV. Igumbi lokutyela linetafile enkulu yokutya okanye yokulungiselela umsebenzi ongekho kwindawo. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngefriji, isitovu, imicrowave, umenzi wekofu, itoaster kunye nazo zonke iimbiza, iipani, nezinto zetafile ezifunekayo kwiqela labantu abane. Nangona emancinci, amagumbi okulala athambile kwaye anamagumbi kunye needrowa zempahla yakho. Iibhedi zombini zilingana nendlovukazi. Igumbi lokuhlambela linebhafu enkulu yokufunxa, kwaye sibonelela ngeetawuli ezininzi ezintsha, ezicocekileyo. Uya kuba nokufikelela kwigumbi lokuhlambela labucala kwigumbi elingaphantsi -- le ndawo ayabelwanga nomnye umqeshi kwaye ifikeleleka kuphela kundwendwe olusezantsi. Nceda ujonge imifanekiso yethu ngeenkcukacha ezithe vetshe zokuseta. Ukupaka kulula kunye neendawo zethu zokupaka ezihlala zifumaneka ezitalatweni (i-driveway igcinelwe umqeshi osisigxina kwiflethi ephezulu.) Siyavuya ukwabelana nawe ngesi sithuba ngelixa undwendwela iMetro Detroit!
UMlambo iRouge luluntu oluncinci ngaphandle nje kweDetroit. Uninzi lwezindlu zakhiwa kwikota yokuqala yeminyaka yoo-1900 zabasebenzi kwiifektri zentsimbi kunye neemoto ezikufutshane. Namhlanje iRouge iseyindawo yabasebenzi eyenziwe ngabantu abahlukeneyo--abanye abahlala apha ubomi babo bonke, kwaye abanye batsaleleke eRouge ngenxa yerenti efikelelekayo. Izindlu zisondelelene kunye, izitalato ezisecaleni ziyindlela enye kuphela. Indlu yethu yindlu yokuqala eMpuma yeJefferson Ave (isitrato esikhulu esihamba ngoMlambo iRouge). Ngexesha lokuhlala kwakho, uya kubona imisebenzi emininzi-abantu benyuka besiya eJefferson Ave, abantwana bebaleka bedlala, izinja zikhonkotha, iimoto zihamba zidlula. Ngamanye amaxesha unokuva iimpondo ezivela kwiinqanawa ezinkulu kuMlambo waseDetroit :) Ivenkile encinci yegrosari yasekhaya imalunga neenyawo ze-300; kukho iMcDonalds kunye neDairy Queen ekude nje; kwaye kukho iiDispensaries (zabo bazonwabisayo) phezulu nje esitratweni!
Ungaqhagamshelana nam ngomyalezo wakwa-Airbnb. Ndihlala kufutshane, ngoko ke ndiza kufumaneka ngokubanzi ukuba uyandidinga, kodwa andizukudlula.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- River Rouge